Fiadiana ny amboara eran-tany FIFA Qatar: 10 amin'ireo hotely vaovao mampientanentana indrindra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Qatar » Fiadiana ny amboara eran-tany FIFA Qatar: 10 amin'ireo hotely vaovao mampientanentana indrindra
Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • Sports
Androany no manamarika ny fanisana herintaona amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA Qatar 2022. Qatar Tourism dia manambara trano fandraisam-bahiny 10 mahavariana sy toerana mahaliana hanokatra alohan'ny hanombohan'ny lalao.
Hanala ny fahafinaretana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA ho avy ve ny COVID?
Mandeha haingana ny fizahan-tany Qatar miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano 100 mahery vonona hampiantrano mpijery sy atleta
Mba hamenoana ny fangatahana dia mikasa ny hampiasa ny safidy trano rehetra i Qatar. Ny safidy vaovao ho an'ny mpankafy amin'ny taona 2022 dia ahitana ny fitobiana any an'efitra sy ny fijanonana amin'ny sambo fitsangatsanganana vonjimaika miaraka amin'ny fomba fijery manaitra ny lanitry ny tanànan'i Doha.
Qatar dia hanana efitrano 130,000 ho an'ireo mpankafy mihoatra ny iray tapitrisa andrasana mandritra ny fifaninanana 28 andro.
Niomana handray mpankafy mihoatra ny iray tapitrisa i Qatar mandritra ny fotoanan'ny fifaninanana.
Hoy i Berthold Trenkel, Lehiben'ny Fampandehanan-draharaha ao amin'ny Fizahantany Qatar: “Ny mpankafy baolina kitra dia hanana karazana trano fonenana miavaka azo isafidianana. Tianay ny mpandeha hahita ny tsara indrindra amin'ny fampiantranoana Qatari sy Afovoany Atsinanana ary hanana traikefa tsy hay hadinoina izay hahatonga azy ireo haniry hiverina. Ary koa ny fijerena ny baolina kitra, dia mamporisika ny mpankafy rehetra izahay hanadihady ireo karazana mahasarika ao Qatar, manomboka amin'ny fakana santionany amin'ny sakafo eo an-toerana ka hatramin'ny fijerena ny tranombakoka malaza, manomboka amin'ny fandrobana dune mampientanentana mankany amin'ny fialan-tsasatra amin'ny spa na eny amoron-dranomasina, misy zavatra ho an'ny rehetra.
Ny 10 amin'ireo trano fandraisam-bahiny vaovao sy manintona indrindra dia ahitana:
anarana Location About
1 Nosy Qetaifan Avaratra Akaikin'ny tanànan'i Lusail Nosokajiana ho "Nosy Fialam-boly" voalohany ao Qatar, ny fampandrosoana dia ahitana toeram-pialan-tsasatra raitra, valan-drano manara-penitra, klioba amoron-dranomasina, fivarotana ary tilikambo mifangaro. Ny nosy dia ho eo akaikin'ny kianja Lusail izay hanaovana ny famaranana amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2022™.
2 Katara Towers Lusail Marina District Mampiantrano hotely kintana dimy, ny tilikambo malaza ao Lusail dia fandikana ara-javakanto ny tombo-kase nasionalin'i Qatar, maneho ny sabatra scimitar nentim-paharazana. Hanombohana ny marika Fairmont sy Raffles any Qatar ihany koa ilay trano.
3 Mametraka Vendome Lusail Hisokatra ao an-tanànan'i Lusail any Qatar ny Place Vendôme ary hampivondrona ny varotra, fialamboly ary fialamboly. Ny fampandrosoana dia hametraka trano fandraisam-bahiny roa kintana dimy (Le Royal Méridien sy Palais Vendôme, Hotel Luxury Collection), trano misy serivisy (Le Royal Méridien Residences), fivarotana fivarotana 560 isan-karazany, ary kianja malalaka tsara tarehy voahodidin'ny kafe sy trano fisakafoanana.
4 andramena Central Doha Miorina amin'ny tilikambo roa manaitra aingam-panahy avy amin'ny haran-dranomasina ao Qatar, Rosewood Doha sy Rosewood Residence Doha dia ahitana trano fandraisam-bahiny, spa ary tobim-pahasalamana manara-penitra.
5 Tilikambo Kambana Aljaber Lusail Marina District Ny iray amin'ireo Tilikambo Kambana Aljaber dia ho trano fandraisam-bahiny misy rihana 22 ao amin'ny Distrikan'i Marina, manolotra trano fonenana, efitranon'ny mpanjaka ary dobo filomanosana ambony tafo ary trano fisakafoanana manatrika ny Hoala Arabo.
6 Pullman Doha West Bay Mamirapiratra ao amin'ny distrika malaza indrindra ao Doha, ilay kintana dimy Pullman Doha West Bay trano fandraisam-bahiny dia hapetraka ao amin'ny tilikambo maoderina avo manaitra.
7 Dream Doha Doha Natao ho fananan'ny Dream Hotel Group ao amin'ny Golfa, ny trano mahavariana misy efitra 266 dia ahitana toeram-pisakafoanana sy fialam-boly valo samihafa, trano fonenana 35 ary dobo filomanosana; mitambatra avokoa ny rehetra mba hamoronana traikefa momba ny fandraisana vahiny.
8 Ny Nosy St. Regis Marsa Arabia Ny Pearl-Qatar Mankalaza ny lova manankarena amin'ny kolontsaina tatsinanana, The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl-Qatar, dia hanolotra oasis miavaka miaraka amin'ny toerana tsy manam-paharoa izay mampiavaka azy amin'ny fampandrosoana rehetra any Qatar.
9 ME Doha Doha Ny trano fandraisam-bahiny dia hanana lakilen'ny efitrano 235, trano MICE, dobo tsy manam-petra ary safidy fisakafoanana.
10 West Walk Al Waab Fampivoarana fampifangaroana tsy manam-paharoa ao afovoan'ny faritra malaza indrindra ao Doha, miaraka amin'ny hotely kintana efatra, sinema ary hypermarket, misy kafe sy fivarotana maro.
Qatar dia laharan'i Numbeo ho firenena azo antoka indrindra eran-tany amin'ny heloka bevava sy ny fiarovana amin'ny ankapobeny. 18-24°C ny maripana antonony any Qatar mandritra ny Novambra sy Desambra – tonga lafatra ho an’ny mpankafy sy mpilalao.